I-Tray Packers - I-Delta Engineering Belgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "I-Tray Packers"
Ukuqoqa itafula ukupakisha amabhodlela ngesandla - kwetafula le-buffer 800 mm ububanzi / 1200 mm ubude.
Ishicilelwe ku I-Tray Packers
Ukuqoqa itafula ukupakisha amabhodlela ngesandla - kwetafula le-buffer 1000 mm ububanzi / 1200 mm ubude.
Ukuqoqa itafula ukupakisha amabhodlela ngesandla - kwetafula le-buffer 1200 mm ububanzi / 1200 mm ubude.
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-800 mm netafula le-buffer elingu-1200 mm ubude.
NgoLwesihlanu, i-07 March 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-1000 mm netafula le-buffer elingu-1200 mm ubude.
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-1200 mm netafula le-buffer elingu-1200 mm ubude.
NgoLwesine, i-30 Juni 2016 by UCristina Maria Sunea
I-Tray packer - itafula le-buffer elifushane
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-800 mm netafula le-buffer elingu-300 mm ubude.
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-1000 mm netafula le-buffer elingu-300 mm ubude.
Umshini ukupakisha amabhodlela emathileyi obubanzi obufika ku-1200 mm netafula le-buffer elingu-300 mm ubude.
Iphakethe lesitayela sefreyini elifakiwe
Umshini ukupakisha amabhodlela anezintambo phansi emathileyi kububanzi obufika ku-800 mm kanye nokuhanjiswa kwe-buffer okungama-2500 mm ubude.